Ndị njem merụrụ ahụ site na nfefu nke ụgbọ elu na-agba ụgbọ elu United Airlines | Nchedo
Home » Nchedo njem na Mberede » Ọnwụ ndị na-ebugharị ndị ọrụ ụgbọelu gbara ụgbọ elu gbara ndị gbara ụgbọ elu United United ebubo
Ọnwụ ndị na-ebugharị ndị ọrụ ụgbọelu gbara ụgbọ elu gbara ndị gbara ụgbọ elu United United ebubo
UA Flight 328 Boeing 777-200 na-aga Honolulu mgbe nkeji anọ ka ọ gbapụchara ihe gbawara, igwe ọkụ ahụ gbara ọkụ.
Ndị njem hụrụ ụgbọelu ahụ ọkụ na n'akụkụ aka nri nke nku
Ndị ọkwọ ụgbọ elu jiri otu injin weda ụgbọelu ahụ
Ikpe ikpe obodo na-ebo ebubo na ọ dịkarịa ala $ 50,000 na emebi emebi na Circuit Court nke Cook County
Iflọ ọrụ Clifford Law taa gbara akwụkwọ ikpe abụọ na Illinois megide United Airlines n'aha ndị njem abụọ na-ata ahụhụ dị egwu nke sitere n'ụgbọ elu nke furu efu njin injinị mgbe ha si Denver na-aga Hawaii na February 20, 2021.
UA Flight 328 Boeing 777-200 na-aga Honolulu mgbe nkeji anọ ka ọ gbapụchara ihe gbawara, igwe ọkụ ahụ gbara ọkụ. A manyere ndị na-anya ụgbọ elu ịlaghachi na Denver ka ndị njem hụrụ ụgbọelu ahụ na-ere ọkụ n'akụkụ aka nri nke nku ahụ na injinị ahụ na-efu. E nwere ike ịnụ ụda dara ụda na-edekọ ụda olu nke ụgbọ elu ahụ nke mechara nweta.
Ndị ọkwọ ụgbọ elu nwere ike iweta ụgbọelu ahụ na otu injin ha yana Federal Aviation Administration (FAA) ekwuola na ọ na-enyocha ụgbọ elu ndị ọzọ nwere injin yiri ya iji hụ ma nkwarụ ahụ zuru ebe niile. Oge ụgbọ elu nke ụjọ bụ nkeji 24 tupu ụgbọ elu ahụ emetụ ala.
Ikpe ikpe obodo na-ebo ebubo na ọ dịkarịa ala $ 50,000 na nbibi na Courtlọikpe Circuit nke Cook County na-ekwupụta nnukwu nsogbu na nhụjuanya tara ahụhụ maka ndị njem abụọ bi na Hawaii.
"Ndị njem nọ n'ụgbọ elu a chere na ọ ga-abụ nke ikpeazụ ha," Robert A. Clifford, onye nchoputa na onye otu okenye na Clifford Law Offices na Chicago, kwuru, bụ ụlọ ọrụ ụgbọelu ama ama n'ụwa niile. Ọ bụ onye ndụmọdụ ndụmọdụ n'ihe mberede ụgbọ elu Boeing 737 MAX dara na Etiopia afọ abụọ gara aga wee gbuo mmadụ 157 niile nọ n'ime ya. Ọ na-anọchite anya ezinụlọ nke mmadụ iri asaa na abụọ ahụ. Weregodị ya na ị na-ahụ ka onye njem si na windo nke ụgbọelu na-elepụ anya, na-elelị injinị ahụ anya n'ọkụ. Jọ ị na-atụ na-adịru ogologo ndụ gị niile. ”
Vidio e bipụtara na Twitter site na mberede ahụ gosipụtara injin ahụ ọkụ na-ere ọkụ ka ụgbọelu ahụ na-efe. Achọpụtara iberibe ụgbọ elu ahụ n'okpuru ala, gụnyere irighiri ihe na-ada site n'ụlọ wee jiri ntakịrị ọkara tufuo otu egwuregwu iri na abụọ n'egwuregwu bọọlụ na mpaghara dị nso.
Mmadụ abụọ na iri anọ nọ n'ụgbọ elu ahụ, ọtụtụ ndị mechara kwuo na ha na-ekpe ekpere n'ụzọ niile ịlaghachi n'ọdụ ụgbọ elu, na-enwe olileanya na ha ga-ahụ ụmụ ha ọzọ. Ọtụtụ kpọtụrụla Clifford Law Offies n'ihi nnukwu nsogbu ha nwetara na iji hụ na ha nwetara azịza maka ihe mere na ihe a mere.
Safetylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchebe Transportgbọ njem Mba (NTSB) na-eme nyocha banyere ihe mberede ahụ nke nwere ike iwe otu afọ ma ọ bụ karịa iji mechie.